Bhaibheri Rinokubatsira Kudzivisa Matambudziko—Kutamba Nemwoyo Yevamwe, Unzenza, Uye Kudhakwa
Zvinodzidziswa neBhaibheri Zvinobatsira
1 Bhaibheri Rinokubatsira Kudzivisa Matambudziko
2 Bhaibheri Rinokubatsira Kugadzirisa Matambudziko
3 Bhaibheri Rinokubatsira Kutsungirira Matambudziko
Zvinotaurwa neBhaibheri Nezveramangwana
Nharireyomurindi | Nhamba 1 2018
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Bhaibheri rakafemerwa naMwari uye mazano arimo ‘anobatsira pakudzidzisa, pakutsiura uye pakururamisa zvinhu.’ (2 Timoti 3:16) Ichokwadi here? Verenga unzwe kuti mazano ari muBhaibheri akabatsira sei vamwe kusiya zvinhu zvakaipa zvavaiita.
Delphine, ambotaurwa munyaya yapfuura akaona kuti kuzvidya mwoyo kwaimuita kuti anwe doro zvakanyanya. Bhaibheri harirambidzi kunwa zvine mwero, asi rinoti: “Usava mumwe wevanonwisa waini.” (Zvirevo 23:20) Kunwisa kunokonzera urwere, kuparara kwewanano uye kufa kwemamiriyoni evanhu gore negore. Kudai vanhu vaizotevedzera zvinotaurwa neBhaibheri, matambudziko aya aisazovapo.
Delphine akashandisa mazano ari muBhaibheri. Anoti: “Ndakaona kuti doro rakanga risiri kupedza kuzvidya mwoyo kwandaiita. Ndakaita zvinotaurwa pana VaFiripi 4:6, 7, inoti: ‘Musazvidya mwoyo pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari.’ Usiku hwega hwega pandainzwa kuti pfungwa dzava kundikurira, ndaibva ndanyengetera kuna Jehovha. Ndaimuudza zvese zvaindishungurudza, uye ndaimukumbira kuti andibatsire kuziva zvandingaita kuti ndisaramba ndichifunga nezvedambudziko rangu. Pandaizomuka mangwanani, ndaiedza chaizvo kuti ndisaramba ndichishungurudzika. Kunyengetera kwakandibatsira kuti ndiise pfungwa pazvinhu zvandaiva nazvo kwete zvandakanga ndisisina. Ndakabva ndatsidza kuti zvedoro handichadi. Ndakanga ndisingachadi kuti pave nechimwe chinhu chinonditorera rugare rwandakanga ndava narwo.”
Unzenza ndechimwe chinhu chinokonzera kuti vanhu varwadziwe zvakanyanya. Asi Bhaibheri rinogona kutibatsira kudzivisa zvinhu zvinokonzera kuti munhu azoita unzenza, zvakadai sekutamba nemwoyo wemumwe munhu uye kuona zvinonyadzisira. “Ndainakidzwa nekutamba nemwoyo yevasikana,” anodaro mumwe mukomana anonzi Samuel. “Dzimwe nguva ndaiona musikana achindifarira, asi ini ndisingamudi. Saka ndaibva ndanakidzwa nekuita sendinomuda.” Samuel akaona kuti vanhu vaigara vachimuti anotamba nemwoyo yevasikana, kunyange paaingotaurawo hake navo pasina zvimwe zvaaivafungira. Zvakaita kuti apedzisire ava kutozviita nemaune. Asi akanga asiri kufara nezvaaiita. Anoti, “Zvandaiita zvakanga zvakaipa nekuti unopedzisira wava kuita zvinhu usingafungiwo vamwe.”
Samuel akaverenga nyaya yevechidiki iri pajw.org. Akabva afunga zvinotaurwa pana Zvirevo 20:11, iyo inoti: “Mukomana anoratidza kana basa rake rakachena uye kana rakarurama nezvaanoita.” Vhesi iyi yakamubatsira sei? Samuel akaona kuti zvaaiita zvakanga zvisina kuchena uye kururama. Anoti: “Ndakaonawo kuti munhu anokura achitamba nemwoyo yevamwe, anopedzisira ava neunhu hunozokanganisa imba yake kana aroora kana kuroorwa. Ndakatanga kufunga kuti mudzimai wandicharoora anozonzwa sei kana akandiona ndichifarira vamwe vakadzi. Izvi zvakaita kuti ndione kuti zvandaiita zvakanga zvisina kunaka. Kunakidzwa nekuita chimwe chinhu hakurevi kuti chinhu ichocho chakanaka.” Samuel akabva asiyana nezvaaiita uye zvakamubatsira kuti asaita unzenza.
Antonio akanga apindwa muropa nekuona zvinonyadzisira. Kunyange zvazvo akanga aine mudzimai waaida chaizvo, aingoramba achiona zvinonyadzisira. Anoti 1 Petro 5:8 yakamubatsira chaizvo. Inoti: “Svinurirai, rindai. Mhandu yenyu Dhiyabhorosi, inofamba-famba seshumba inodzvova, ichitsvaka kudya mumwe munhu.” Antonio anoti: “Zvinhu zvinonyadzisira zvakazara kwese kwese, uye ukazviona hazvibudi mumusoro. Vhesi iyi yakandibatsira kuti ndifunge nezvekunobva zvinhu izvi. Ndaifanira kukurumidza kuyeuka kuti zvinhu izvi zvakasviba zvinobva kuna Satani. Iye zvino ndava kuziva kuti Jehovha chete ndiye anogona kundibatsira ‘kuramba ndakasvinurira uye ndakarinda’ kuitira kuti zvinhu izvi zvisakanganisa pfungwa dzangu, mwoyo wangu uye wanano yangu.” Antonio akawana rubatsiro uye akakwanisa kusiyana netsika iyi yakaipa. Izvi zvakamubatsirawo kuti asapinda mumatambudziko akatonyanya kuipa.
Zvatanzwa izvi zvinoratidza kuti Bhaibheri rinogona kutibatsira kuti tisapinda mumatambudziko akakura. Ko kana uine matambudziko atodzika midzi? Verenga nyaya inotevera unzwe kuti Shoko raMwari rinogona kukubatsira sei kugadzirisa matambudziko akadaro.
Bhaibheri rinogona kutibatsira kuti tisapinda mumatambudziko
Bhaibheri Rinokubatsira Kudzivisa Matambudziko
Nhamba 1 2018 | Bhaibheri Richiri Kushanda Here?
NHARIREYOMURINDI Nhamba 1 2018 | Bhaibheri Richiri Kushanda Here?
Bhaibheri Rinotii Nezvekuona Zvinonyadzisira Uye Kutaura Nezvebonde Paindaneti?